Videos – Page 2 – Dooxo Diaspora Forum – Golaha Qurbo Joogta Dooxa
Boqorka iyo Dhaxal Sugaha Sacuudiga oo hambalyo u soo direy Madaxweynaha Soomaaliya
Boqorka Dalka Sacuudi Carabiya Boqor Salmaan Bin Cabdicasiis iyo dhaxal sugaha dalkaas Maxamed Bin Salmaan ayaa dhambaal Hambalyo ah usoo diray Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo,taas oo ku saabsan munaasabadda sannad-guurada 60-aad ee madax-bannaanida goballada Koofureed ee dalka iyo Midowgii labada gobol ee Waqooyi iyo Koofur.
Hambalyada ayaa lagu yiri “Boqorka isaga oo ku hadlaya magaca, shacabka iyo dowladda Boqortooyada Sacuudi Carabiya, wuxuu bogaadin iyo hambalyo kal iyo laab ah u diraya Madaxwayanaha iyo shacabka Soomaaliyeed isagoo u rajeyanaya farxad, degganaansho iyo nabad waarta”
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa hambalyo u soo direy madax kale oo ka tirsan caalamka.
Maamulka Galmudug oo ka hadlay dagaal ka dhacay Dhuusamareeb
Wasaaradda Amniga Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa ka hadashay iskahorimaad hubeysan oo maanta ku dhex maray magaalada Dhuusamareeb Ciidamo ka wada tirsan dowladda Federaalka ku dhexmray .
Qoraal kasoo baxay Wasaaradda Amniga Galmudug ayaa waxaa lagu sheegay inay Guddi xaqiiq raadin ah ay u saareen dagaalkii ka dhacay Dhuusamareeb ee u dhexeeyay Ciidanka NISA iyo kuwa Booliska dowladda ee Haramcad.
“Wasaaradda Amniga Gudaha Gamudug waxey u saartay guddi baaritaan iyo xaqiiqo raadin ah shaqaaqo iyo gacan ka hadal muddo kooban ku dhexmartay laba ciidan maantay magaalada Dhusamareeb” ayaa lagu yiri Qoraalka.
Sidoo kale Wasaaradda ayaa tilmaamtay in Guddigan ay baaritaano ku sameeyn doonaan sababta keentay dagaalka dhexmaray labada Ciidan iyo dhibaatooyinkii bulshada ka soo gaaray.
Wasaaradda ayaa ugu baaqday Ciidanka dowladda ee ku sugan Magaalada Dhuusamareeb inay ilaaliyaan xasiloonida deegaanka iyo sumcadda ciidamada qalabka sida.
Hase yeeshee dagaalkii ka dhacay Caasimadda Galmudug ayaa waxaa ku dhaawacmay 5 qof oo isugu jira labada dhinac iyo dad shacab ah, waxaana dagaalkaas uu ka dhashay muran maalmihii lasoo dhaafay ka taagnaa bar Koontarool oo ku yaalla Dhuusamareeb.
Madaxweyne Farmaajo oo xarigga ka jaray Madxafka Qaranka
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xarigga ka jaray Madxafka Qaranka ayaa ku bogaadiyey dhallinyaradii isu xilqaamay dib u dhiska Madxafka, ganacsatada Soomaaliyeed iyo shaqaalaha rayidka ah ee Dowladda sida ay uga mira dhaliyeen baaqii ku saabsanaa in dib loo dhiso xarumaha danta guud, bilicda iyo kaabeyaasha nolosha.
Madaxweynaha ayaa ku ammaanay dhallinyarada Soomaaliyeed sida ay Dowladda ugu gacan siinayaan horumarinta iyo dib u dhiska dalka, iyaga oo mideysan kana fog qabyaaladda iyo kooxeysiga, taas oo ah jidka kaliya ee ay kula tartami karaan barbaarta caalamka.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa ku adkeeyey Taariikhyahannada iyo hal abuurka Soomaaliyeed in ay xoojiyaan doorkooda ku aaddan ilaalinta taariikhdii gobonimo doonka dalkeenna oo ku suntan midnimo, wadajir iyo howlkarnimo, isla markaasna ay uga tagaan shacabkeenna dhaxal Hiddo-raac ah oo u iftiiminaya mustaqbalkooda.
“Dhismaha Madxafka Qaranka waa tallaabadii ugu horreysay ee ku aaddan soo nooleynta taariikhda dadkeenna iyo dalkeenna, waxaa ina hortaalla shaqo baaxad weyn oo ku saabsan sidii aan dib ugu soo celin lahayn aasaartii iyo milgihii keydsanaa ee dalkeenna, waana arrin uu gacan ka geysan karo muwaadin kasta oo qadarinaya sooyaalka iyo mustaqbalka Umadda Soomaaliyeed.”
Munaasabadda Xarig-jarka Madxafka Qaranka waxaa ka qaybgalay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cumar Maxamuud Maxamed Filish iyo Ku-xigeennadiisa, Wasiirro ka tirsan Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Taliyeyaasha Ciidamada Qalabka Sida iyo Guddiyada Heer Federaal iyo Heer Gobol ee Xuska 60-guurada Xornimada iyo Midnimada.
Guddiga Doorashooyinka Madaxabanaan oo diiwaangeliyay 8 xisbi oo cusub
Guddiga Madaxbanaan ee doorashooyinka Qaranka ayaa maanta Shahaadooyinka KMG ah ee diwaangalinta siiyay 8 xisbi oo ku biiraya xisbiyadii Guddiga uu horey u diwaangaliyay..
Munaasabadda xisbiyada lagu sinayay shahaadada oo ay ka qeybgashay guddoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaran Xaliimo Ismaaciil ayaa lagu qabtay qaab online ah iyadoo uu Guddiga aaladda ZOOM- ka u adeegsiday qabsoomidda Munaasabadaas.
Xisbiyada la diiwaangeliyay maanta ee la siiyay shahaadooyinka ayaa waxaa ay kala ahaayeen;-
– Xisbiga Bulshada Dimoqaardiga Soomaaliyeed.
– Xisbiga Nolosha iyo Cadaaladda.
– Xisbiga Walaalaha Midoobay.
– Xisbiga Tubta Horumarka iyo Nabadda.
– Xisbiga Isbahaysiga Mustaqbalka.
– Xisbiga Soomalinimo.
– Xisbiga Cadaaladda Horumarinta Dimoqaraadiyadda iyo Isqadarinta iyo Xisbiga Badbaado Qaran.
Guddoomiyihii Ururka Naafada K/Galbeed oo lagu dilay Baydhabo iyo Al-Shabaab oo sheegatay
Guddoomiyihii ururka Naafada Koofur Galbeed Shariif Mukhtaar Jiis ayaa kooxo hubeysan ay ku dileen hoygiisa oo ku yaalla magaalada Baydhabo.
Sida wararku sheegayaan kooxo bastoolado ku hubeysan ayaa Mas’uulkaas oo naafo ahaa ugu galay hoygiisa, kadibna ku toogtay, iyagoo goobta ka baxsaday.
Al-Shabaab ayaa war ay ka soo saartay dilka Guddoomiyaha Ururka Naafadda Koofur Galbeed ku sheegatay mas’uuliyadda dilkaas.
Warka Al-Shabaab ka soo baxay ayaa sidoo kale lagu sheegay inuu ninkaas ka tirsanaa Ciidamada Booliska, isla markaana uu ahaa Kornel ka tirsan waaxda dambi baarista CID-da.
Magaalada Baydhabo ayaa muddooyinkii u dambeeyay xaaladeeda amniga wanaagsaneyd, iyadoo in muddo ah aanay ka dhicin dilalka gaadmada ee ay fuliyaan kooxaha hubeysan.
Dagaal u dhaxeeya Ciidamada Nabadsugida iyo Booliska Haramcad oo ka socda Dhuusamareeb
Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in dagaal u dhaxeeya Ciidamada Nabadsugida iyo Ciidanka Booliska ee Haramcad ayaa ka socda xaafado ka tirsan Dhuusamareeb.
Dagaalka ayaa ka dambeeyay kaddib markii shalay askari ka tirsan ciidanka Nabadsugida lagu dilay Dhuusamareeb, isla markaana arrintaas ka dhalatay xiisada u dhaxeysa labada ciidan.
Dagaalka ayaa ka socda agagaarka Xero Inji illaa Madaxtooyada, waxaana la maqlayaa hub culus oo la isu adeegsanayo.
Wararka ayaa sheegaya in khasaaraha dagaalka uu ku kooban yahay labada ciidan ee dagaalamaya, waxaana uu dagaalka hakad geliyay isu socodka magaalada.
Dagaalka ka socda Dhuusamareeb ayaa ku soo aaday, xilli uu magaalada Dhuusamareeb ka maqan yahay Madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor oo safaro ku maraya deegaano ka tirsan Mudug iyo Galgaduud, isagoo haatan ku sugan Caabudwaaq.
C/raxmaan C/shakuur “Buugga Villa Somalia wax ka fiiriso, waxaa laga soo minguuriyay Addis Ababa”
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur Warsame oo xalay ka hadlayay Munaasabad uu Xisbigiisa Wadajir ku qabtay magaalada Muqdisho laguna xusayay 1-da Luulyo ayaa ka hadlay arrimo kala duwan oo siyaasadda dalka iyo arrinta matalaada Gobolka Banaadir.
C/raxmaan C/shakuur ayaa sheegay in buugga Villa Somalia wax ka fiiriso laga soo minguuriyay Addis Ababa, isla markaana tallaabooyinka uu qaado Abiy Ahmed wax badan looga daydo.
Mar uu si kaftan uga hadlayay xariggii Jawar Mohamed oo ahaa Mucaaradka Abiy Ahmed oo shalay lagu xiray ayuu yiri in taas oo kale ay dhici karto in Villa Somalia dadka ka soo horjeeda in iyagana la xiro.
buugga Vila somalia wax ka fiiriso, waxaa laga soo miinguur Addiis Ababa, nin ayaa maanta isoo wacay oo ka mid ah dadka arrimaha geeska afrika aad ula socdo, markaasuu i yiri ninkii Jawar Mohamed in la xiray ma maqashay, jawar waa nin hoggaamiya mucaaradka Itoobiya, markaasaa ku iri haa waa arkay adiga lagu soo socdaa is ilaali ayuu i dhahay, maxaa yeelay Abiy Ahmed hadduu xiray ninkii ka soo horjeeda, Villa Somalia shaqo kale ma qabaneyso dadka ka soo horjeeda ayay xireysaa, meeshaas laga soo qaataa tilmaamaha ee hala is jiro, marka haleyga warqabo yaan mar labaad la is gaadinee”ayuu yiri C/raxmaan C/shakuur.
Mar uu ka hadlayay arrinta matalaada Gobolka Banaadir ayuu xusay in loo baahan yahay in la helo Matalaad iyo maqaam isla socota oo aan loo baahneyn Senator lagu soo kordhiyo oo cida magacaabeysa aan la ogeyn, maadaama gole deegaan aysan jirin, Madaxtooyadana ay dadkee rabto soo magacaabeyso.
Waxaa uu sheegay arrinta Maqaamka ay ka mid aheyd waxyaabihii loo eryay Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir Taabit Cabdi Maxamed, markii uu isku dayay inuu sameeyo shir wadatashi ah oo looga hadlo Maqaamka, isagoo xusay in aanay jirin cid diidan matalaada Aqalka Sare, balse loo baahan yahay in magaalada yeelato maqaam ay dadkeeda ku soo doortaan gole deegaan oo ay kula xisaabtamaan golayaasha deegaanka oo aanay u baahneyn matalaad 10 senator ah oo lagu kordhiyo aqalka sare oo maanta kooram la’aan u xiran yahay.
“Kalfadhigii hore waxaa la geeyay Baarlamaanka mooshin ay saxiixeen in ka badan 120 Xildhibaan, waxaa la yiri maqaamka Muqdisho halaga hadlo, Guddoonka Baarlamaanka hoos ayay dhigteen waa u yaallaa illaa hadda, Guddoomiyihii hore Gobolka Banaadir Taabit Cabdi waxaa lagu racdeeyay Muqdisho maqaam u raadinaa, magaalada xaalad ka dhacday, ciidan la keenay, xaruntii gobolka la wareegeen, maanta ayaa waxaa la soo tiirinayaa ilinta yaxaaska, Muqdisho la diidan yahay mataaladeeda, cid diidan ma jirto matalaada Muqdisho”